Templelọ Nsọ nke atọ - WRSP
Ụlọ Nzukọ nke atọ
NDỊ MGBE MGBE MGBE AKA
1967: Israel weghaara ụlọ nsọ Temple / Haram ash-Sharif n'oge agha ụbọchị isii, na-akpali mmụọ nke ndị Mesaya n'etiti ndị Juu okpukpe.
1974: Gush Emunim (Block of the Faithful), nzukọ nke Mesianic na-ekpe ikpe ziri ezi, bụ ntọala iji gbaa ụka ndị Juu kwadoro na West Bank, Gaza, na Golan Heights.
1984: Uzo ala ndi Ju gbalịrị ịfụ Dome nke Oké Nkume iji bido iwughachi ụlọ nsọ ndị Juu na Ugwu Templelọ Nsọ.
1987: E guzobere Templelọ Nsọ aslọ Nsọ dị ka nzukọ agụmakwụkwọ na-adịghị eme ihe ike raara nye iwu thelọ Nsọ nke Atọ.
1990 (October): Templelọ Nzukọ nke Atọ kwupụtara na ọ ga-atọgbọ "isi nkuku" nke Templelọ Nsọ nke Atọ, na-eduga n'ọgba aghara na Ugwu Templelọ Nsọ.
1990s: Rabbi Shlomo Goren, onye bụbu Chief Ashkenazi Rabbi nke Israel, malitere ịkwalite njem ndị Juu na ekpere n'Ugwu Templelọ Nsọ.
1999: Templelọ Nsọ Templelọ Nsọ ahụ mechara iwu nke candelabra ọlaedo otu nde dollar maka ụlọ nsọ nke atọ n'ọdịnihu
2000 (Septemba): Prime Minister nke Israel Ariel Sharon gara n'Ugwu ,lọ Nsọ, na-akpasu Intifada nke Abụọ.
2000: Womenmụ nwanyị maka Thelọ Nsọ tọrọ ntọala.
2004: “Nzụkọ Sanhedrin” guzobere nke ọma (ụlọ ikpe kachasị ndị rabaị nke ndị na-akwado ụlọ nsọ kwenyere na ha ga-achị Izrel mgbe ewughachiri Templelọ Nsọ nke Atọ).
2010s: Institutelọ Nsọ andlọ Nsọ na ndị otu ya na ibe ya malitere ịhazi Templelọ Nsọ nke Atọ "emume emume" maka ọha na eze, ebe ndị ụkọchukwu ndị Juu (Cohanim) na-eme àjà anụmanụ na ememe iji kwadebe maka Templelọ Nsọ nke Atọ.
2011: Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị Juu okpukpe malitere ịbanye n'Ugwu /lọ Nsọ / Haram ash-Sharif na njem njem njem.
2012: Institutelọ Nsọ movedlọ Nsọ ahụ kwagara ebe ọ dị ugbu a n'ofe site na Western Wall ebe ọ na-egosiputa ụgbọ mmiri temple.
2012: Emere ihe àjà anụmanụ mbụ Ememme Ngabiga mere na Jerusalem.
2013: Onye na-arụ ọrụ n'ụlọ nsọ nke atọ bụ Yehuda Glick mere iku ume mgbe ndị uwe ojii machibidoro ya ịbanye n'Ugwu Templelọ Nsọ.
2013: N'ịgbaso ihe nlereanya nke Yehuda Glick, ndị na-akwado Thirdlọ Nsọ nke Atọ malitere ikwu banyere ịnweta ndị Juu n'Ugwu aslọ Nsọ dịka "nnwere onwe okpukpe" na "ikike ụmụ mmadụ."
2014 (October 29): Onye na-arụ ọrụ n'ụlọ nsọ nke atọ bụ Yehuda Glick lanarịrị ọnwụ igbu ya.
2015 (Fall): N'oge ezumike ndị Juu, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị okpukpe okpukpe banyere n'Ugwu Templelọ Nsọ na ndị isi na-akwado thelọ Nzukọ nke Atọ na-eme ka esemokwu dị na Palestinians.
2015 (Fall) na 2016 (Oge Ezumike): A na-eme ọgụ mwakpo na-ebuso ndị Juu agha ma bụrụ onye a maara dị ka "Intifada nke Atọ."
2016 (Eprel): E jidere ndị na-akwado Templelọ Nsọ nke atọ maka ịnwa iweta àjà anụmanụ dị ndụ n'Ugwu forlọ Nsọ maka ezumike Ememe Ngabiga.
2016 (November 7): Ndị ozi sitere na ndị nnọchi anya ụlọ Likud na ndị Juu kwupụtara nguzobe nke ““lọ Mgbakọ Templelọ Nsọ” ”raara nye ịkwalite okwu nke ọbịbịa ndị Juu na ekpere n’Ugwu Templelọ Nsọ.
Ụlọ nke atọ bụ Ụlọ Nzukọ Alaeze bụ ọrụ nke ndị nduzi maka ụlọ nke Ụlọ Nsọ nke atọ nke ndị Juu n'Ugwu Ụlọ Nsọ / Haram ash-Sharif, ụlọ ọrụ ndị nchụàjà nke ndị Juu, na nlọghachị nke ọchịchị ndị Juu na-achị n'Izrel (Feldman 2017; Chen 2007; Xbox 2009; Gorenberg 2000). Ọga a na-anọgide na-arụ ụka nke ukwuu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Middle East, na-ekwukarị na ha na-ekere òkè na-akwado usoro ime ihe ike na ala na Israel / Palestine. Nye ndị Juu, e kwenyere na Ụlọ Nsọ ahụ bụ saịtị nke Ụlọ Nsọ Ndị Mbụ na nke Abụọ, ebe a na-edebe iwu na ime mmụọ, bụ ebe ndị Izrel oge ochie nyere ụmụ anụmanụ anụ àjà nye Chineke. Dịka amụma ndị Juu si kwuo, a ga-ewu ụlọ nke atọ n'elu Ugwu Ụlọ Nsọ mgbe "ndị Juu ahụ e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ" laghachiri n'ala Israel, na-ebido oge ọhụrụ.
Nye ndị Alakụba, ụlọ Haram ash-Sharif bụ ụlọ alakụba Al-Aqsa ma weere ya dịka ebe atọ kasị dị nsọ na Islam. Ekwenyere na obu ebe onye amuma Muhammad rigoro n'elu igwe. Kemgbe oge British Mandate, Haram ash-Sharif aghọwo ebe dị mkpa na ihe nnọchianya nke nnwere onwe Palestian na iguzogide Zionism. Na mgbakwunye na nke okpukpe na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Haram ash-Sharif bụ ebe dị mkpa maka ọrụ mmụta na ọrụ ọrụ ebere n'ime obodo Palestian. Nye ndị Palestian, na ndị Alakụba n'ụwa nile, Ụlọ Nzukọ nke Atọ nke atọ na-anọchite anya ihe iyi egwu nke Islam nke ebe nsọ a na ihe mgbochi ime ka udo dị n'ógbè ahụ.
Ebumnuche nke Templelọ Nsọ nke Atọ ahụ nwere ike ịmaliteghachi na mmalite afọ nke mba Israel na otu dị ka Brit Hachashmonaim, otu ndị ntorobịa okpukpe-Zionist, nke hụrụ mmezigharị mba dị ka ịdabere na ịmaliteghachi ọchịchị ndị Juu na iwughachi ụlọ nsọ. n’elu Ugwu Templelọ Nsọ na Jeruselem. Movementlọ Nzukọ gainedlọ Nsọ mechara nweta mmeri mgbe Israel meriri na 1967 War, nke ndị okpukpe Zaịọn kọwara ya dị ka ihe ịrịba ama na oge ndị mesaịa na-eru nso. Mgbe gọọmentị Israel laghachiri ugwu ahụ na Waqaf nke Jordanian mgbe agha ahụ bisịrị, ndị a nwere mmetụta nke ndakpọ olileanya, na-eleghị steeti mba anya dị ka arịa maka mgbapụta. N'ime afọ ndị sochiri agha ahụ, e nwere nnukwu mbido nke otu ndị otu na-eme ihe ike nke mesaya iji wepụta ihe n'aka ha iji mezuo amụma ndị Juu gbasara nlọghachi nke mba ndị Juu na Ala Israel nke na-eduga n'oge nke Mesaịa (Inbari 2009: 33) -39).
N'ịbụ nke sitere n'ihe omume nke 1967, Gush Emunim (Block of the Faithful), otu òtù na-achịkwa ndị na-achịkwa ezi ofufe, malitere na 1974 iji nyere aka mee ka ndị Juu banye na West Bank, Golan Heights, na Gaza. Na 1980s, na-esote ọganihu nke usoro mmegharị okpukpe, a jidere ndị òtù ndị Juu na-eme atụmatụ ịfụ Dome nke Oké Nkume n'elu ogige ash ash Sharif iji nwee ike ịmalite agha mpaghara, nke ha chere na ọ ga - arụpụta na Israel ijide nke Ụlọ Nsọ Obot na ụlọ nke atọ Ụlọ Nzukọ. A ga-emesị wepụta ụlọ mkpọrọ na-ahụ maka ndị ọrụ nchịkwa Yehuda Etzion, bụ onye na-eme ihe ike, ga-enyere aka chọta "ndị na-adịghị eme ihe ike" nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze, na-elekwasị anya n'ịgbanwe echiche ọha na eze ma na-eme ka ikike ọchịchị nwee ike ịchịkwa Ụlọ Nsọ . Kemgbe mmalite 1990s, Ụlọ nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Ụlọ ahụ agbaghaala onwe ya dị ka ihe na-adịghị mma, na-elekwasị anya na mmeghachi omume ọha na eze nke ememe ụlọ nsọ, dị ka àjà anụmanụ, na ntụrụndụ nke arịa dị nsọ nke Ụlọ Nsọ.
Thetù na-edu ndú n'azụ usoro "enweghị ike" nke Templelọ Nsọ nke atọ bụ Templelọ Nsọ ,lọ Nsọ, nke hiwere na 1984 site n'aka Rabbi Yisrael Ariel. Ariel rụrụ ọrụ na mbụ na ndị agha Israel nke na-achịkwa Ugwu duringlọ Nsọ n'oge agha 1967, ahụmịhe nke kpaliri ya itinye ndụ ya na ụlọ nke Templelọ Nsọ (Inbari 2009: 31-49). Ozi nke temple Institute ugbua kọwara ụlọ nsọ ahụ dịka nzukọ "nkuzi", nke ewepụtara iji kuziere ndị Israel banyere mkpa thelọ Nsọ dị site na "nyocha, nzukọ ọmụmụ akwụkwọ, mbipụta, na nzukọ, yana imepụta ngwa agụmakwụkwọ." Institutelọ ọrụ ahụ na-ekwekwa nkwa “ime ike anyị niile dị oke ntakịrị iweta iwulite ụlọ nsọ ahụ n’oge anyị” (weebụsaịtị websitelọ Ọrụ Institutelọ Nsọ 2017).
Taa, ụlọ ọrụ Ụlọ Nsọ nọgidere na-azụlite ego maka iwu "arịa atọ nke ụlọ nsọ," dị ka uwe ndị nchụàjà, ihe ọla edo, na ebe ịchụ àjà, nke ha kwenyere na a ga-eji mee ihe mgbe e wuru Ụlọ nke atọ. Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ ahụ gosipụtara arịa ndị a n'àgwà ogige ndị njem nleta ya site na Wall Street na Old City nke Jerusalem, ebe ọ na-arụkwa ọrụ na-aga n'ihu iji zụọ ihe Cohanim, Ndị ikom Juu ndị si na nchịkọta ndị ụkọchukwu, [Foto dị n'aka nri] ka ha wee dịrị njikere ịbanye n'ozi ndị nchụàjà na Ụlọ Elu nke Atọ.
Iji kwado ọrụ ya, ụlọ ọrụ temple ahụ na-enweta ọrụ afọ ofufo mba (ọrụ ndị agha na-adịghị agha) site na ala Israel, na nnukwu ego kwa afọ site n'aka Ministry of Culture, Science and Sports, Ministry of Education, na Ministry of Defence ya oru nakwa onyinye sitere n'aka ndị Juu na ndị Kraịst ozioma na mba ọzọ (Ir Amim na Keshev 2015) .. Ọ bụ ezie na ndị ọchịchị Israel na Prime Minista Benjamin Netanyahu adịghị akwado nkwado nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze, ala ahụ na-aga n'ihu inye ndị na-ahụ maka ụlọ nsọ ego. kwado ọnụ ụzọ a haziri ahazi nke ndị na-akwado ndị Juu n'Ugwu Ụlọ Nsọ maka njem nlegharị anya site n'inye ha nchebe ndị uweojii maka ọrụ ha (Feldman 2017).
Ebe ọ bụ na 1990s, Ụlọ Nzukọ nke atọ na-agba ndị Juu okpukpe ume ka ha rịgoro n'Ugwu Ụlọ Nsọ dịka omume nke okpukpe nsọpụrụ ofufe, na ụdị nke ịkpa mba na-ekwupụta n'ihu ọha na ndị Juu na-ekwu na n'Ugwu Ụlọ Nsọ. Ebe ọ bụ na 2010, na ọbịbịa nke usoro mgbasa ozi ọha na eze na-ewu ewu, Ụlọ nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze enwewo ike ịrụ ọrụ mgbasa ozi na nke mba nile iji weta ndị Juu okpukpe n'Ugwu Ụlọ Nsọ, na-agbasa n'ihu ọha na omenala ndị rabaị dị ogologo nke na-egbochi ndị Juu njem uka na saịtị ahụ (n'ihi na ndị Juu ga-emerụ saịtị ahụ site na ịbanye n'adịghị ọcha). Site n'inweta ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị Juu n'Ugwu Ụlọ Nsọ ka ha kpee ekpere, site na usoro nke njem nleta na-eduzi, njem ahụ na-achọ ime ka ndị Juu banye na saịtị nsọ a ma tinye nrụgide dị ukwuu na ndị isi ọchịchị iji mee ihe iji kwalite Israel ịchịkwa ugwu ahụ, nke dị ugbu a n'okpuru ikike nke Jordan Waqf (ọ bụ ezie na ndị agha Israel na-agafe ụlọ ahụ ma nwee ike tinye n'oge ọ bụla). Dịka nkwekọrịta dị n'etiti Israel na Jọdan, a naghị ekwe ka ndị Juu na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-eme ememme ndị Juu mgbe ha na-eleta ugwu ahụ. Mgbe ndị Juu na-ekpe ekpere na-agbalị ikpe ekpere n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ nke olu, ha na-esi ike n'ugwu ndị uwe ojii Israel.
Ogologo njem nlegharị anya na Ugwu Ụlọ Nsọ na-edukarị ndị isi na atọ nke ụlọ nsọ na ndị rabaị, ndị na-edu ndú ha site na nkwadebe omume dị ọcha, na-enye akụkọ ihe omume na nkà mmụta okpukpe n'oge njem ahụ, na inyere ndị nwere aka na-ekpe ekpere n'echebara ugwu (Feldman 2017 ).
Ogologo njem nlegharị anya enwewo ihe ịga nke ọma n'inweta nkwado maka ọbụbụeze nke Israel n'elu ugwu na normalizing echiche nke iwu Ụlọ Nsọ nke atọ n'ime Israel ka ndị mmadụ na-ahụkarị ndị mmadụ na-ahụ maka okpukpe. Edere ndị Juu na ejidere ha na ebe kachasị nsọ ha nyeere ndị nke atọ Ụlọ Nzukọ Alaeze aka ikwu na ohere ndị Juu na-abanye n'Ugwu Ụlọ Nsọ bụ ihe gbasara "nnwere onwe okpukpe" na "ikike ụmụ mmadụ," ya mere, ala Israel, dị ka ụlọ ọrụ onye kwuo uche ya, kwesịrị ịlọghachite ndị Juu n'ugwu (Fischer 2017; Feldman 2017).
Onye na-akwado ụlọ ọrụ nke atọ bụ Yehuda Glick bụ onye na-akwado ndị na-akwado ihe ndị ruuru mmadụ. Na 2014, Yehuda Glick ghọrọ aha ezinụlọ n'Izrel mgbe ọ lanarịrị mgbalị Mutaz Hijaz, onye Palestian si East Jerusalem. Mwakpo a mere ka ozi Glick sikwuo ike na ndị Juu bụ ndị pilgrim na-emeghị ihe ọjọọ n'Ugwu Ụlọ Nsọ, megidekwa ịkpa ókè na Islam na-enweghị ike ịjụ ịkọrọ òkè nsọ a ma kweta njikọ ndị Juu na ya. Ọ bụ ezie na ndị na-arụ ọrụ Ụlọ Nzukọ nke atọ ji nkà na-ekwu okwu banyere ihe ndị ruuru mmadụ iji nweta nkwado na ịnweta akụ na ụba, ha na-achọzi ịchichi ụwa kpam kpam ma guzobe ọchịchị.
N'akụkụ na-akwado njem ndị Juu na-aga n'Ugwu Ụlọ Nsọ, Ụlọ nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze lekwasịrị anya na mmeghachi omume ọha na eze nke ememme ụlọ nsọ. Ememe nke Ememe Ngabiga, nke a na-eme kwa afọ kemgbe 2012, bụ nke kachasị ukwuu nke mmegharị ememe nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze nke na-eme na nnọkọ ndị Juu. Ihe ndị a na-eme ememe ndị a bụ ndị ọkachamara dịka targilim, nke pụtara ihe omume, n'ihi na ha na-ekwe ka ndị na-eme mgbalị mee ememe ụlọ nsọ ka ha wee dịrị njikere imezu ha mgbe e wughachiri ụlọ nsọ ahụ. Ememe ndị a na-arụ ọrụ mmụta maka ijegharị ahụ, na-akwado nkwado sitere n'aka ndị isi okpukpe na nke aka nri bụ ndị nwere ike ọ gaghị abụ ndị na-akwado Ụlọ Nzukọ Atọ, ma na-akwadokarị echiche nke ịkwado ọbụbụeze Israel n'ugwu ma na-ekwusi njikọ ndị Juu nke Akwụkwọ Nsọ gaa n'Ugwu Ụlọ Nsọ. N'ozuzu, nnyocha ndị a na-adịbeghị anya achọpụtawo na a na-ele ihe omume ememme ngabiga ahụ anya dị mma site n'aka ndị Israel. Akwụkwọ akụkọ okpukpe bụ Arutz Sheva chọpụtara na n'etiti ndị na-agụ 681 gbara ajụjụ ọnụ, ihe dị ka pasent iri isii na asatọ kwenyere na imebi àjà Ememe Ngabiga bụ "ọrụ kwesịrị ekwesị na nke dị mma."
Ebe ọ bụ na 2010s, Ụlọ nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Ụlọ arịbaala elu, na-enweta nkwanye ùgwù n'etiti ndị na-ahụ maka okpukpe ndị mba ọzọ na ndị mba ụwa. Nnyocha ndị e mere n'oge a na-egosi na ihe ruru pasent iri atọ nke ọha mmadụ Israel nke Israel kwadoro iwuru ụlọ nsọ na Haram ash-Sharif na pasent iri ise na itoolu kwenyere na e kwesịrị inwe mgbanwe na ọnọdụ quo, dị ka ịgbatị Israel ịchịkwa saịtị ahụ ma ọ bụ ịtọpụ iche na-eleta oge maka ndị Juu na ndị Alakụba, dịka e mere na Abraham nke Tomb na Hebron. Kemgbe 2015, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị òtù Knesset kwadoro nke atọ na Ụlọ Nzukọ Alaeze nke atọ wee gaa na njem nlegharị anya na Ugwu Ugwu na-eduga ndị na-akwado ụlọ nsọ nke atọ (Verter 2015). Na November 7, 2016, ndị ụkọchukwu si Likud na ndị Juu na-ezukọ na-ekwupụta na e guzobere "Ụlọ Mbata Ụlọ Nzukọ Alaeze" nke a raara nye ọganihu nke nleta ndị Juu na ekpere n'elu Ugwu Ụlọ Nsọ (Newman 2016).
Kemgbe mbibi nke Ụlọ Nsọ nke Abụọ na 70 OA site na ndị Rom, ụlọ nsọ ahụ anọgidewo na-arụ ụka na nkwenkwe okpukpe ndị Juu na ofufe, site n'usoro mmalite ya dị ka ekpere. Ụlọ nsọ bụ akụkụ dị mkpa nke ekpere ekpere ndị Juu na-ekpe ekpere ugboro atọ n'ụbọchị. A na-eji ndị rabaị tụnyere ekpere kwa ụbọchị maka mgbanwe maka àjà ịchụ àjà maka ụbọchị niile nke dị n'elu Ugwu Ụlọ Nsọ ahụ. Dị ka ihe atụ, kama ndị ụkọchukwu ụlọ nsọ na-asa aka ha ma na-achụ anụmanụ, na-ele ndị Juu anya na-asa aka ha ma na-ekpe ekpere tupu ha eri nri. Achịcha ahụ na-aghọ ihe mgbakwunye maka àjà anụmanụ na ọrụ afọ dị ka "ebe ịchụ àjà" n'ime ahụ ndị Juu, ebe ọkụ ọkụ ahụ na-agbanwe ihe anụ ahụ nke achịcha ahụ n'ime nri ime mmụọ. Omume a nke ndị Juu na-eme iji mee ka ụlọ nsọ na anụ anụmanụ dị iche iche n'ekpere na n'ememe, na-adabere na ọbịbịa messianic kachasị nke Swedish Zionist Orthodox (echiche nke na mmadụ aghaghị ichere ndidi maka ọbịbịa Mezaịa na Ụlọ nke atọ karịa " mee ka njedebe "site na nkịtị) (Inbari 2009: 7).
N'ụzọ dị iche, ndị na-agbalite Ụlọ Nzukọ nke atọ na-eme ka ndị mmadụ bụrụ ndị na-aga n'ihu, na-ekwenye na mmadụ aghaghị ime ihe ndị dị irè iji wughachi ụlọ nsọ ma weta oge nke ndị Messiah, kama ichere maka enyemaka Chineke ịmalite usoro ahụ. A puru ighota ihe omuma echiche a dika ihe omuma nke nzuko okpukpe Zionist nke nke iri abuo nke bu nke di n'akwukwo nke Rabba Avraham Isaac Kook (1865-1935). Kook ghotara ihe okike nke State nke Israel, site na ịrụ ọrụ nkịtị nke Zionist ụwa, dịka akụkụ dị mkpa nke usoro ndị Messiah, ebe ọrụ ime mmụọ na ọrụ ime mmụọ dị oke mkpa maka mgbapụta (Mirsky 2014). Omume sitere n'aka mmadu n'ime uwa bu ihe di mkpa iji kpalie ma kpalie ihe site n'ala ndi Chineke n'elu. Kook kụziri na mgbapụta malitere site na njedebe onye ọ bụla ma gbasaa mmadụ niile na ụwa. Site na nke a, ọbụna ụkọ Zamanị nke ụwa na-aghọ ebe dị nsọ maka ibido amụma ndị Juu (nlọghachi nke ndị Juu a dọọrọ n'agha gaa n'ala Israel na iwughachi Ụlọ Nsọ na-eduga n'oge oge messianic).
Maka ndị na-akwado Ụlọ Nzukọ nke atọ, karịsịa ndị òtù okpukpe Israel-Zionist ndị na-agbaso nsụgharị nkà mmụta okpukpe nke ụlọ akwụkwọ Kook, echere na Ụlọ Nsọ nke atọ dịka njedebe ezi uche nke Zionism. Ugbua na nhazi ndi Juu n'Ala Israel na nbili mba (dika ndi ala nke ala nke oge a) agwuzu, ndi ulo oru nche ulo ofufe kwenyere na uzo ozo iji mezuo amuma bu imeghari omuma nke Israel na omenala. Iji mezuo nke a, ndị na-akwado Ụlọ Nzukọ Alaeze kwenyere na ha ga-ewughachi Ụlọ nke atọ n'Ụlọ Elu nke Ụlọ Nsọ dị na Jerusalem iji mee ka ndị Juu na-arụ ọrụ nchụàjà na ịchụ àjà anụmanụ dị ka a kọwara na Torah na ndị rabaị. Ha na - ewughachi ụlọ nsọ ahụ, ha kwenyere na ha ga - eso n'akụkụ ntọala nke ọchịchị Torah nke ọchịchị, nke ụlọikpe kachasị elu nke ndị rabaị na - achịkwa akpọ "Sanhedrin." Nweghachi Ụlọ Nsọ nke atọ na nhazi nke ọchịchị ọchịchị a ga - emezu Zionist usoro nke mmeghari mba, iweta oge messianic na mgbapụta maka mmadu nile. Ndị na-akwado Ụlọ Nzukọ nke atọ kweere na ụwa dum ga-amata ụlọ nsọ nke atọ dịka otu ezi ụlọ nke Chineke na ga-eleta ụlọ nsọ nke atọ dịka ndị pilgrim.
Dika ulo nke ato nke ulo uka choputara echiche nke ala nke ala nke ala eze, owelitere uzo nke ndi Ju na ndi na-abughi ndi Ju n'oge oge ndi Kraist. Iji mee ka echiche ahụ bụ na Ụlọ nke atọ bụ Ụlọ Nzukọ Alaeze bụ ọrụ zuru ụwa ọnụ maka mmadụ niile, Ụlọ ọrụ nke atọ esitewo na ndị obodo ndị Juu, dịka Ndị Kraịst ozioma, na-eweta ha dị ka ndị na-akwado echiche na ego. Mgbalị ndị a na-eme iji mee ka Ụlọ Nsọ nke atọ dịrị, dịka ọrụ mgbapụta maka ihe nile a kpọrọ mmadụ, emewokwa ka ọganihu nke Ndị Noa (Ụmụ Noa) ndị obodo, okwukwe ọhụrụ nke Judas nke ndị na-abụghị ndị Juu na-akwado Ụlọ Nzukọ Atọ nke atọ na ozizi nkà mmụta okpukpe Zayọn.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ndị ọrụ ncheta nke atọ anaghị ekwenye na ha na-eme ihe ọ bụla ọhụrụ ma ọ bụ ọganihu n'usoro nkà mmụta okpukpe nke ndị Juu ma ọ bụ ememe okpukpe, ma na-eme ka ọdịnala oge ochie ha dị ọhụrụ ma na-eme iwu ha ruo n'ogo zuru oke (nke 613 nyere iwu na Iwu ahụ, ihe ka ọtụtụ n'ime ha metụtara ọrụ ụlọ nsọ na ịchụ àjà anụmanụ). Ndị na-akwado Ụlọ Nzukọ nke atọ na-arụkarị ụka na, naanị ndị Juu na-agbaso iwu iwu nke iwu, dị ka ibi úgwù na iwu kosher, iwu ndị metụtara Ụlọ Nsọ na àjà dị oke mkpa ma kwesịkwara ịkwado ugbu a na ndị Juu alọghachila n'ala nna ha wee nwee ike na-emezu iwu nile nyere Ala Israel. Iji mee ka omenala nke Akwụkwọ Nsọ bụrụ eziokwu, ndị na-akwado Ụlọ Nzukọ nke atọ dị njikere iji akụ na ụba nke mba Israel (ego, nchedo ndị uweojii, na nnọchiteanya ndọrọ ndọrọ ọchịchị) dịka ọ bụ ezie na ihe mgbaru ọsọ kasịnụ ha bụ ịhazigharị alaeze ọchịchị nke ethno-ọchịchị Chineke. (Feldman 2018).
Taa, ọ dịkarịa ala iri abụọ na itoolu dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-arụ ọrụ Ụlọ Nzukọ, tinyere otu kpọmkwem maka ndị ikom, ndị inyom, na ndị ntorobịa, nke a nwere ike ịkọkọta n'okpuru nche anwụ sara mbara nke "Templelọ Nzukọ nke Atọ nke Atọ." Mmụba nke otu ndị a na-eme ihe ike, na ọdịdị nke usoro nke atọ nke oflọ Nsọ nke Atọ, enyewo aka na uto ya na mba ahụ na ike ya iru ndị na-akwado ya n'ogologo afọ, okike, na agbụrụ agbụrụ. [Foto dị n'aka nri] Otu "Womenmụ nwanyị maka workslọ Nsọ" na-arụ ọrụ iji hazie ụmụ nwanyị ndị Ọtọdọks nke Ọtọdọks ka ha soro na njem Ugwu andlọ Nsọ na ọtụtụ "ọrụ aka" Templelọ Nsọ, dị ka ịkwadebe àjà achịcha maka mmeghachi omume ememme. Otu a "Returnlaghachi n'ugwu" na-enye ndị ntorobịa na ndị na-eto eto nọ n'afọ iri abụọ ha, ebe "Studentsmụ akwụkwọ maka Templelọ Nsọ" na-ahazi ụmụ akwụkwọ kọleji gburugburu mba ahụ na nkwado nke iwughachi Templelọ Nsọ, na-arịọ ndị na-eto eto okpukpe na ndị mba ọzọ.
Onye ọ bụla na-eme ihe ike raara onwe ya nye n'ihu dị iche iche nke ụlọ nsọ, dika ọzụzụ Cohanim (Ndị ụkọchukwu ụlọ nsọ), na-akwadebe arịa nsọ dị nsọ nke ụlọ nsọ na atụmatụ atụmatụ ụlọ, na-egbu ndị òtù Knesset, ma ọ bụ nhazi ihe ngosi na Jerusalem. Ọ bụ ezie na ha raara onwe ha nye n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ nsọ ụlọ, ndị a dị iri abụọ na itoolu na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-akwado enyemaka nke mgbasa ozi ọha na eze, iji nọgide na-eme ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị Juu gaa n'Ụlọ Nsọ na-eduzi njem nleta. Òtù dịgasị iche iche na-ejikọkwa aka na ịchụ àjà ụlọ nsọ na ihe omume kwa afọ ebe ndị rabaị, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ndị na-akwado ọrụ na-eme atụmatụ na ịgakwuru ọha mmadụ.
Mgbe ha na-eche banyere echiche nke iwu Ụlọ Nsọ nke atọ, otu ọ bụla nke ụlọ ọrụ nke atọ dị iche iche dị iche iche na-adabere n'ụdị akụ ala ma na-akwado ndị uweojii Israel. Ngalaba ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ nke ọma dịka Ụlọ Ọrụ Ụlọ Nsọ na-arụ ọrụ iji nọgide na-enwe mmekọrịta dị mma na ndị isi obodo, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka nri, na ndị gọọmenti gọọmenti na-akwado ọrụ ha. Iji mee ka onyinyo ha dị ka "nzukọ" na "agụmakwụkwọ," Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ ahụ na-ezere ikwupụta n'ụzọ doro anya banyere mbibi nke Alakụba Islam ash-Sharif ma ghara ikwuputa ime ihe ike megide Palestinians. N'ụzọ dị iche, ndị ntorobịa ntorobịa, dị ka ụmụ okorobịa na ndị inyom bụ ndị so n'ìgwè "Ịlaghachi n'Ugwu" hụ ọkwa nke Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Nsọ dị ka onye na-enweghị isi ma na-egbochi mmegharị ahụ. Ndị ntorobịa ntorobịa a nwere ụzọ dị iche iche, na-aga n'ihu n'ihu na ndị na-efe Muslim na ndị uwe ojii Israel nọ n'Ugwu Ụlọ Nsọ. N'elu ugwu, ndị na-eto eto na-emekarị ihe mkpasu iwe, dịka ikpere n'ala n'ekpere ma ọ bụ ikpughe ihe ọkọlọtọ Israel, nke na-eme ka a chụpụ ha na saịtị ahụ na nkwụsịtụ nwa oge na Ụlọ Nsọ.
Ọ bụ ezie na Ụlọ Nzukọ Alaeze enweghị usoro nlekọta na-enweghị isi, e nwere ndị rabaị (ndị isi nke Ashkenazi nke Ọtọdọks) bụ ndị nkà mmụta okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eduzi usoro ahụ. Ndị a na-agụnye Rabbi Yisrael Ariel (Onye guzobere Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Nzukọ), Rabbi Chaim Richman (Onye isi nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ, Prọfesọ Hillel Weiss (Onye Ndú nke Ememme Ngabiga Ememme Ngabiga), Yehuda Etzion (Onye Ndú Onye Ndú nke Ndị Juu) Yehuda Glick (onye ọrụ ụlọ ọrụ nke atọ na Knesset Member), na ndị òtù Rabbi nke a na-akpọ "ndị Sanhedrin" (nke na-achọ ịghọ ụlọ ikpe kachasị elu na-akwado iwu Torah n'Izrel na-esote iwughachi ụlọ nsọ ahụ.) Echiche nke ndị rabaị ndị a. na-akwado ma gbasaa site na ọtụtụ ndị ọzọ na-akwado rabbi ndị na-arụ ọrụ dịka isi nke okpukpe-Zionist obodo na seminarị Israel dum, karịsịa na mpaghara West Bank ụlọ ọrụ ndị Rabbis na-akwado nke atọ Ụlọ Nzukọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ seminarị na njem njem gaa Temple Ugwu, zụlite ọgbọ ọhụrụ nke ụmụ okorobịa na ndị rabaị n'ọdịnihu na nkà mmụta okpukpe nke atọ, na-eme ka echiche ahụ sie ike na iwu ụlọ nsọ bụ ihe mgbaru ọsọ nke ndị Juu na njedebe nke ọrụ Zionist.
Ọ gaghị ekwe omume ịkọ ọnụ ọgụgụ kpọmkwem nke ndị na-akwado Ụlọ Nzukọ nke atọ n'ihi otú otu òtù si dị iche. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ narị ndị nọ n'ọrụ n'ime iri abụọ na itoolu na-arụsi ọrụ ike, ọnụ ọgụgụ nke ndị ideological na-akwado (ma ego na okpukpe) nakwa dị ka Ụlọ Nsọ na-eje ozi njem, n'ezie nọmba na iri puku kwuru iri puku. E nwere ihe àmà na-egosi na mmegharị ga-anọgide na-eto eto. Ụlọ akwụkwọ okpukpe n'oge nile nke mba a nabatara otu dị iche iche dị ka Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ iji nye ọzụzụ "ihe nketa ụlọ nsọ" maka ụmụaka. Ụlọ Nzukọ Ụlọ ahụ aghọwokwa ebe ndị njem nleta na-ewu ewu maka ndị Israel na ndị ọbịa mba ụwa, ndị na-eleta ụlọ ahịa nke Ụlọ Nzukọ Alaeze ma na-eweta usoro udo na nke ọdịda nke Ụlọ Atọ nke atọ, ebe a na-ewu ụlọ nsọ dịka ọrụ dị mkpa nke ndị Juu na ụwa dum. Na nkenke, Ụlọ Nzukọ Atọ nke atọ ejiriwo nke ọma tinye ya n'àkwà nke ndị okpukpe na ndị nwe obodo na ọbụna ndị na-achị ụwa na-agbanye n'ọtụtụ ụfọdụ, na-eme ka o sie ike soro ebe ọ na-amalite na njedebe maka nọmba ọnụ ọgụgụ.
Nsogbu kachasị njọ nke Ụlọ Nzukọ Atọ nke atọ bụ ọrụ ọ na-arụ n'ime ime ka ihe ike na ala dị na Israel / Palestine dị ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị Juu, ndị rabaị, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ndị na-esote Ụlọ Nche nke atọ abanye n'Ụlọ Nsọ / Sharif kwa ụbọchị. Site na Palestian anya, uto nke Ụlọ Nzukọ Alaeze na-anọchite anya egwu dị egwu nke Al-Aqsa Mosque na Haram ash-Sharif, nke fọdụrụ ebe ọha na eze nọ ebe ndị Palestaịn nwere mmetụta nke onwe ha na Jerusalem. Na 2015-2016, na-atụ egwu na Al-Aqsa nọ n'ihe ize ndụ nke mgbakwunye nke Izrel kpatara ọgba aghara ebe ụmụ okorobịa Palestian na-eche banyere ndị Juu okpukpe n'okporo ámá. Oge a na-eme ihe ike a maara dị ka "Nke atọ Intifada." Ndị uweojii sitere na oge a jikọtara ọgụ na-atụ egwu egwu n'etiti ndị Palestaịn na ọchịchị Israel na-agbasi mbọ ike itinye mgbidi Haram ash-Sharif site n'ikwe ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị Juu okpukpe ịbanye.
Dika Ụlọ nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze na-anọgide na-eme ka echiche nke ndabereghachi nke Akwụkwọ Nsọ na ọnọdụ ọchịchị Chineke pụta ìhè, ọ na-eme ka ndị Palestaịn kweta na ala ahụ site na iwu ndị Juu nke Ọtọdọks. N'ime ọnọdụ ọchịchị ọchịchị messianic a n'ọdịnihu, na-arụ ọrụ n'okpuru iwu Torah, ndị Juu ga-enwe ohere ịnweta ụmụ amaala.
Taa, Israel na-arụ ọrụ dịka ụkpụrụ ethnocratic (Yiftachel 2006). Ọ bụ ezie na Israel na-agbaso ọdịdị nke ụmụ amaala ndị Palestinians n'ime akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, inweta ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụnụba akụ na ụba, na ikike mbata na-adabere na mba ndị Juu. Ụlọ nke atọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze na-anọchite anya mmalite nke a ethno-ọchịchị uzo ebe ndi Ju kwadoro ala ahu, obughi nani echiche nke nmekorita nke emeworo ka ha buru onye Palestian, ma obu ihe mbu bu Chineke nyere ndi Ju ohere ka ha nweta ala ahu dika sitere na Torah. Ndị na-akwado ụlọ nsọ nke atọ na ndị rabaị na-ekwupụta n'ụzọ doro anya na ha jụrụ echiche nke ọchịchị onye kwuo uche ya, n'ihi na echiche ndị a bụ "ndị mba ọzọ" na omenala ndị Juu. Iji mezue usoro nke mgbapụta, ndị Juu aghaghị ịtụpụ yoke nke njikọrọ nke Europe ma weghachite ọdịdị ala ha n'oge ochie na "ụmụ amaala".
Ebe ọdịda nke Oslo, mmegide ndị Juu na-aga n'ihu, na ime ihe ike kwa ụbọchị, echiche nke ụkpụrụ nke ethno-ọchịchị Chineke enweela ụzụ, na-eduga na ndị mmekọ mba ụwa na ndị Zionist Zionist nke na-akwadoghị na Knesset na-akwado echiche nke ịgbakwunye Nkume Ụlọ Nsọ, dịka ihe ga-eme otu ugboro ma hụ na ọbụbụeze zuru oke nke Izrel na-achị ala (Persico 2017).
Foto #1: Ụmụ nwoke ndị Juu bụ ndị sitere n'usu ndị ụkọchukwu (Cohanim) na-emegharị n'oge ochie nke ememe ụlọ nsọ iji kwadebe maka iwu Ụlọ Elu nke atọ.
Image #2: Ụmụ nwanyị maka Ụlọ Nsọ na-eduga otu ìgwè ndị Juu gaa n'Ugwu Ụlọ Nsọ iji kụziere ha banyere mkpa ọ dị iwuru Ụlọ nke atọ.
Chen, Sarina. 2007. "Ịdị ike na Ịdị Nsọ: Isi okwu dị na Rhetoric na Praxis nke Group Group Zealot" (n'asụsụ Hibru). Nnyocha Jerusalem nke Ndị Juu na-akọ 24 / 25: 245-67.
Feldman, Rachel. 2018. "Ogige nsọ nke Ụlọ Nsọ na Aha nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ: Ihe E Ji Eji Nsọpụrụ Eme Ihe na Nkwupụta Nwepu Onwe Onye na-emepụta Proxy-State Conquest." Journal of Settler Colonial Studies [na-abịa].
Feldman, Rachel. 2017. "Idozi Mbanya na Mesaya na Zionist Politics Action: The Case of Women for the Temple." Akwụkwọ bụ Journal of Middle Eastern Woman's Studies. November 2017. Vol 13. No.3.
Fischer, Schlomo. 2017. "Site na Etzion Yehuda na Yehuda Glick: Site na Redemptive Revolution to Human Rights na Ụlọ Nsọ." Nnyocha Studies Israel 32: 88-103.
Gorenberg, Gershom. 2000. Ụbọchị Ọgwụgwụ: Ihe Nkume na Mgbalị maka Ugwu Ụlọ Nsọ. Oxford: Oxford University Press.
Inbari, Motti. 2009. Okpukpe ndị Juu na Ụlọ Nsọ. Albany: University University of New York Press.
Ir Amim na Keshev. "Onye dị ize ndụ onye ozi: The Dynamics of Rise of Temple Movements and their Implics." 2013. Nweta site na http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/Dangerous%20Liaison-Dynamics%20of%20the%20Temple%20Movements.pdf na 23 November 2017.
Mirsky, Juda. 2014. Rav Kook: Ihe siri ike na oge mgbanwe. New Haven: Yale University Press.
Newman, Marissa. 2016. "Ndị na-akwado Templelọ Nsọ Temple na-ezukọ na Knesset, na-agba PM ume ka 'mepee ọnụ ụzọ' maka ekpere ndị Juu." Nweta site na http://www.timesofisrael.com/temple-mount-activists-convene-in-knesset-urge-pm-to-open-gates-to-jewish-prayer/ na 23 November 2017.
Persico, Tomer. 2017. "Ebe Ọgwụgwụ nke Zionism: Ethnocentrism na Ụlọ Nsọ," Nnyocha Studies Israel 32: 88-103.
Sharon, Jeremy. 2017. "Ndị Juu na-abịa n'Ugwu Ụlọ Nsọ ahụ na-aga 15% Afọ a." Jerusalem Post, January 27. Nweta site na http://www.jpost.com/Israel-News/Jews-visits-to-Temple-Mount-jump-15-percent-this-year-501280 na 23 November 2017.
Yiftachel, Oren. 2006. Ethnocracy: Udo na ala na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Israel / Palestine. Philadelphia: Mahadum nke Philadelphia Press.
Websitelọ ọrụ Institutelọ Nsọ Temple. 2017. Nweta site na https://www.templeinstitute.org/about.html na 23 November 2017.
Akwụkwọ, Yossi. 2015. "Ugwu Ugwu Ugwu nke Na - eme Uzo Na Knesset na Gris nke Israel" https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.683179 na 23 November 2017.